Qiimaha stratospheric-ka ee haysashada Dukaan Apple ah oo ku yaal Union Square ee San Francisco | Waxaan ka socdaa mac
Qiimaha stratospheric ee lahaanshaha Dukaanka Apple ee Union Square ee San Francisco
Jaranjarada dhalada ee Apple Store cusub ee ay bilaabeen Fagaaraha Union ee ku yaal San Francisco, isagaa ku kacay $ 33,333 jaranjarada muraayadda, halka dhismuhu ku kaco qiyaastii $ 19 million, sida ku cad ruqsadaha dhismaha rasmiga ah ee ay heshay 'Patently Apple'.
Nidaamyada daminta dhismaha dabka waxay lahaayeen qiime lagu qiyaasay $ 2.28 million, Ku rakibida tamarta qoraxda qiimaha saqafka $ 800.000halka rakibidda darbiyada ay yar yihiin $ 150,000.
Halkan albaabada Apple Store ayaa furmaya pic.twitter.com/cOIoM1EChb
- Matthew Panzarino (@panzer) May 19 ee 2016
Waa tan burburka buuxa ee kharashaadka kale:
$ 2.28 milyan: Wadarta qiimaha lagu casriyeeynayo nidaamka rusheynta nidaamka rusheynta.
$ 800,000: Qiimaha qalabka korontada ku shaqeeya ee qoraxda oo ah 50 kilowatts oo saqafka ah.
$ 250,000: Qiimaha gudaha iyo dibedda dhismaha dhismaha.
$ 150.000: Qiimaha rakibida baalayaasha qoraxda.
$ 100,000: Qiimaha duminta dukaankii hore.
$ 100,000: Dayactirka dhul gariirka dabaqa labaad iyo saqafka.
$ 82.000: Qiimaha rakibida calaamadaha banaanka dhismaha.
$ 50.000: Qiimaha khaanadaha dukaanka.
$ 4.000: Qiimaha alaarmiga dabka.
Oggolaanshaha dhismaha ma cadda inta ay le'eg tahay albaabbada waaweyn. Albaabada waawayn, oo kuyaala labada dhinac ee bakhaarka, waxay kala yihiin 42 fuudh iyo 40 fuudh ah markay furan yihiin (laga bilaabo 10 illaa 12 mitir).
Kharashaadka waa kuwo aad uxun waxaana ku kacaya sameynta Apple Store, su'aashaydu waxay tahay hadii intaas oo dhan ay macaash sameeyaan. Mise waa uun qaab ka mid ah dadweynaha inaad ku haysato Apple Store meel astaan ​​ahaan u eg.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Qiimaha stratospheric ee lahaanshaha Dukaanka Apple ee Union Square ee San Francisco
Websaydh kale oo khaas ah oo loogu talagalay qiimaha gacanta labaad ee Mac
Saamiga hoose ee muuqaalka Thunderbolt ee ku yaal Apple Store